Indawo Yokuhlala Enoxolo - I-Airbnb
Indawo Yokuhlala Enoxolo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguNevin
Eli lizwe elizolileyo elinokufikeleleka kwabakhubazekileyo lijikelezwe ziifama ezisemaphandleni. Ukuba umntu ufuna indawo ibe ziimayile nje ezimbalwa ukusuka edolophini, kodwa ikude ebantwini, le yindawo onokuya kuyo! Yonke indlu iyafumaneka ukuba isetyenziswe kwaye inokuhlalisa intsapho lula.
Le ndlu ayinawo amagumbi okulala ayi-3 kuphela, kodwa ikwayigumbi elihle kakhulu losapho elinomatrasi ompontshwayo okanye ababini. Igumbi lokuhlala elikufutshane nekhitshi. Kukho indawo eninzi yokuzolula! Igumbi Lokulala Eliphezulu linegumbi lokuhlambela elinekona yebhafu neshawa. Igumbi lokuhlambela lesibini linebhafu/ishawa. I-Wifi iyafumaneka kwabo bangakwaziyo ukushiya itekhnoloji yabo kwaye ininzi indawo yetafile yomntu odinga ukushishina. Kwabo ukoyika izaqhwithi zaseKansas, kukho isaqhwithi, kunye negaraji yeemoto ezimbini kunye nebhokisi eyongezelelweyo yokukhusela imoto. Xa ehamba ngomnyango ongasemva, umntu angahlala everandeni aze onwabele imifanekiso yasefama, okanye angahlala kwindawo esecaleni aze ahlale kwindawo engasemva eyadini encinci eyonwabela umoya omtsha aze amamele iintaka. Yonwabela ikofu esandul 'ukuvunwa njengoko usiya kwilizwe. Iveranda yangaphambili inegrili kwaye umntu unokutsala isitulo ukuze wonwabele indawo evulekileyo. Ngexesha elifanelekileyo lonyaka, unokubona ukuvunwa kwengqolowa phambi kwamehlo akho.
4.89 · Izimvo eziyi-79
Ukuba embindini welizwe lase-Amish, umntu unokubona i-buggy eqhubayo ukuba uchitha ixesha ngeCawa ekuhlaleni. Ikude ngeemayile eziyi-1.7 kuphela yi-Pleasantview Community eyenza iGlenn 's Large Food Store and Deli kunye neFurnishings zeLizwe, ivenkile ethengisa ifenitshala eyenziwe nge-Amish. Enye indawo enomtsalane yiStutzman 's Greenhouse kunye neVenkile Yezipho kunye neDutch Kitchen Restaurant. Zombini iDutch Kitchen kunye neCarolyn 's Essenhaus, ekumgama weemayile eziyi-12 kuphela kwidolophu encinci yaseArlington, zidume ngokutya okuphekiweyo kwaseAmish.
Ukuba umntu unomdla wokubuka iwebhsayithi kwidolophu yaseHutchercial, kufuneka nje bahambe malunga neemayile eziyi-10 ukuya kuMoya Opholileyo okanye iimayile eziyi-11 ukuya kwi-Underground Salt Mine. Kwakhona kwidolophu iHutch yivenkile yezinto zokudlala zakudala eyaziwa ngokuba yiToyi Depot. I-Kansas State Fair edumileyo ikumgama weemayile eziyi-10 kwaye idolophu encinci yaseYoder, indawo ekufutshane nabantu base-Amish, ikumgama weemayile eziyi-13.
Umbuki zindwendwe ngu- Nevin
Nangona sithanda ukudibana neendwendwe zethu, kuba amaxesha amaninzi singaphandle kwedolophu, sisenokungabi nalo elo thuba. Nangona kunjalo, umphathi wesayithi uhlala kufutshane kwaye umntu uya kufumaneka ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo.
Nangona sithanda ukudibana neendwendwe zethu, kuba amaxesha amaninzi singaphandle kwedolophu, sisenokungabi nalo elo thuba. Nangona kunjalo, umphathi wesayithi uhlala kufutshane k…